gaadiidka dadweynaha | Macluumaad loogu talagalay dadka cusub ee USA | USAHello
Sida loo isticmaalo gaadiidka dadweynaha
Ma u baahan tahay si aad u hesho meelaha ee USA? Qaar ka mid ah masaafo aad u baahan tahay si ay u tagaan meel aad u fog yihiin in ay socdaan. Waxaad u baahan doontaa noocyada kala duwan ee gaadiidka si aad u hesho in ay ka shaqeeyaan, dugsiga, iyo meelaha si ay u dukaameystaan. Adeegyada sida basaska iyo tareenada dhulka hoostiisa waxaa lagu magacaabaa gaadiidka dadweynaha, ama transit mass. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah macluumaadka si ay u caawiyaan in aad fahanto basaska iyo nidaamka tareenka.
Gaadiidka dadweynaha waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha ee USA. Helitaanka agagaarka qaadan kartaa ilaa waqti badan aad. Haddii aad ku nooshahay magaalo weyn, waxaad yeelan doontaa in ay helaan gaadiidka dadweynaha, oo ay ku jiraan basaska, tagaasida, dhulka hoostiisa ah. Magaalooyin badan sidoo kale waxay leeyihiin basas ama baabuur gaar ahaan dadka waayeelka ah iyo dadka naafada ah. Haddii aad dooranayso halkaas oo ay ku noolaadaan, isku day inaad hesho guri dabaq ah ama guri ku dhow gaadiidka dadweynaha, haddii ay suuragal tahay.
Marka hore, waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in ay fahmaan tilmaamaha iyo waxaa laga yaabaa in aad laga badiyay. Khariidadaha Google waa mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee kaa caawiyaan inaad hesho waxa aad raadinayso. Waa qalab online in aad ku siin doonaa tilmaamo si aad u socotaan via socodka, gaadiidka dadweynaha, ama baabuur-wadidda.
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa in ay bartaan sida basaska iyo treenada shaqeeyaan.
Basaska Dadweynaha inta badan waa habka ugu raqiisan si aad u hesho mid ka mid meel kale. Waxay noqon karaan buuxo oo gaabis ah, Si kastaba ha ahaatee.
inta badan waxaad ka iibsan kartaa usbuuc walba ama bilwalba bus pass. Waayeelka iyo ardayda xitaa waxaa laga yaabaa in la raaco basaska gaadiidka dadweynaha oo lacag la'aan ah.
Waxaad ka heli kartaa sida ay u soo iibsadaan kaadh bas ee magaalada aad ku a baadhi online. Ku qor magaca magaalada oo aad iyo markaas erayada “baska warbixin u gudbin.”
Safrid baska noqon kartaa wareer. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin aad ku caawin waxaad ku baran in la raaco baska.
Qorshaynta safarka baska
• basaska badankood waxay leeyihiin magac waddo ama lambarka. Tusaale ahaan, inaad waxna ka fuushaan lambarka baska 52. baska Tani waxay raaci doonaan wadada isku mid ah mar kasta oo ay joojiyaan doonaa meelaha la mid ah.
• Soo hel jidka baska. Waa in uu jiraa maps online dhammaan jidadka baska ee magaaladaada ama magaalo. Haddii aad u baahan tahay caawimaad, tag saldhigga basaska weyn ee magaalada iyo caawimaad weydiiso miiska macluumaadka. Waxa laga yaabaa inay ku daabacan maps inay ku siiyaan, iyo basaska intooda badan waxay leeyihiin maps on loox macluumaad badan oo. basaska badan ayaa sidoo kale ayaa la qorsheeyey jeer in ay yimaadaan stop kasta.
• Basaska caadiga ah waxay leeyihiin saacado kala duwan maalmaha shaqada (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, iyo Jimcaha) iyo maalmaha fasaxa (Sabti iyo Axad). bas ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay saacado kala duwan ama soo ordi ciidaha, sida Christmas.
• Layliska aad baska ka hor maalinta ugu horeysa ee shaqada ama dugsiga aad. habkan, waxaad ogaan doontaa jidka baska (waddooyinka baska kaxeeya on) iyo in la aqoonsado joogsiga baska halkaas oo aad u baahan tahay si aad u hesho off ah.
Laga bilaabo safarkaaga baska
• Raadi aad joogsiga baska ee kuugu dhow. Isku day in ay dhowr daqiiqo hore ee kiiska baska waa hore. Oo intaa ka badan, haddii ay jiraan wax badan oo ka mid ah gaadiidka ama dhismaha wadooyinka, baska waxaa laga yaabaa in goor dambe. laga yaabaa in aad rabto in aad baska hore si loo hubiyo in aad timaaddo in ay ka shaqeeyaan waqti.
• Marka aad aragto baska la lambarkaaga soo socda, taagan calaamad joogsiga baska ku ruxruxaa gacantaada. habkan, darawalka waxay ogaan doonaan in la joojiyo oo aad soo qaado. Sida caadiga ah, waxaad ka heli on albaabka hore ee baska dareewalka.
• Bixi darawalka baska aad rakaab, taas oo ah qiimaha baska aad. Waxaa badanaa waa ka jaban si ay u iibsadaan bil kasta kaar bas haddii aad la racayo baska badan. Waxaad u baahan tahay in ay isbedel saxda baska. Taas macnaheedu waxa weeye, haddii kharashka baska $1.50 aad u baahan tahay in ay leeyihiin hal dollar iyo konton senti. darawalka baska ma siin doono inaad bedesho.
• Haddii aadan hubin meesha aad ka heli baska, sheeg darawalka baska. warqad Waxaad keeni kartaa in aad la sheegay in magaca meesha aad u socotid. Waxa kale oo laga yaabaa in aad dooneyso in aad magaca warqadda ku leeyihiin.
• Raadi kursiga madhan ama wax si ay u gal qabtaan haddii ay jiraan kuraasta lahayn.
• fadhiga ee dadka naafada ah ama waayeelka ah waxaa inta badan ku yaala xagga hore ee baska. Waa in aad la siiyo ilaa kuwan kursi waayeelka, dadka naafada ah, ama haweenka uurka leh. Haddii aad tahay qof dhalinyaro ah oo aan idin arko qofka waayeelka ah baska, waa edeb inuu iyaga siinayo, kursigaagu kasta. Laakiin xusuusnow in Maraykanka, qofka ugu horeeya si ay u helaan kursi xaq u leeyahay inuu kursiga, sidaas ma dareemayo wax xun haddii aad ka weyn oo ninna ma uu idin siinayo ay kursiga.
• Ka hor inta aadan gaarin stop, inaad mararka qaar u baahan tahay inaad wacdo dawan ama qaylo, caadi ahaan ku yaalla derbiga ama saqafka baska on, inaad u sheegto darawalka baska si ay u joojiyaan. Waxan samee haddii aadan hubin baska istaago joogsiga kasta. Caawino weydiiso haddii aad u baahan tahay.
• Sida caadiga ah, waxaad isticmaali dhabarka ama dhinaca albaabka si aad u hesho iska baska. Sug ilaa basku ayaa joojiyay dhaqaaqin si aad u hesho off. Waxaad daawan kartaa sida rakaabka kale ka heli off iyo nuqul waxa ay samaynayaan,.
• Haddii baska aan la isugu, waa wax fiican inaan u mahadceliyo darawalka baska marka aad ka heli off.
nidaamka tareenka iyo metro
Tareenada dhulka hoostiisa mara iyo nidaamyada metro waa tareenka magaaladaas guurto tiro badan oo dadka ka soo saldhiga saldhiga. Inta badan tareenada ee dhulka hoostiisa safri aabudhay, laakiin mararka qaarkood tareenada tagaan dhulka ka sareeya aad. In magaalooyinka waaweyn, nidaamka tareenka ama metro inta badan waa habka ugu habboon oo ugu dhaqsaha badan ay u safraan maxaa yeelay waa ay macneheedu tahay by gaadiidka. Si kastaba ha ahaatee, nidaamka metro inta badan kharash badan fuushan baska.
Each big city has a different subway system. Maxaa yeelay, dhammaan hababka dhulka hoostiisa, Waxyaalahan qaar waa isku mid:
• Waxaad u baahan doontaa in la iibsado tigidh ama gudbin ka hor inta aadan u safri karin. Waxaa jira mashiinada tigidhada ee saldhigga kasta. Haddii aad u baahan tahay caawimaad, waxaa jiri doona qof saldhiga. Waxaa laga yaabaa in uu furmo tigidh qofka si ay u caawiyaan a.
• nidaamka tareenka kasta waxa uu map a si ay u muujiyaan khadadka iyo saldhigyada. khadadka dhulka hoostiisa ku jira sida khadadka tareenada. Waxay dhigay wadooyinka iyo saldhigyada si ay u joojiyaan at. Waxaad u baahan doontaa in ay bartaan sida loo akhriyo map dhulka hoostiisa ah.
• Xarunta kasta waxay yeelan doonaan in ka badan hal madal loo helo iyo off tareenka. Waxaad u baahan doontaa in la ogaado jihada aad doonaysid in aad doorato madal.
• Nidaamyada hoostiisa badankood waxay leeyihiin wax ka badan hal line. Waxaad u baahan doontaa in aad ogaato waxa line-upka saldhigga iyo saldhigga caga aad on yihiin. Waxaa laga yaabaa inaad u leeyihiin in ay bedeli khadadka iyo dhufto ee saldhiga kale inta lagu jiro safarka.
• Magaalooyin badan waxay leeyihiin waa weyn Hanuuniyaa online tilmaamaha on sida loo isticmaalo nidaamka tareenka ee. Waxaa jira Hanuuniyaa online for Boston, Los Angeles, New York, San Francisco Bay Area, iyo Washington DC.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad nidaamyada kale ee dhulka hoostiisa baadhi online. Ku qor magaca magaalada oo aad iyo markaas erayada “nidaamka tareenka macluumaadka.”
noocyada kale ee gaadiidka
Haddii aad ku nooshahay magaalo oo yar yar ama meelaha miyiga ah ee dalka, laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u hesho baabuur iyo laysanka darawalnimada. Waxa kale oo laga yaabaa in aad awoodid in aad gaari-pool (heli geeyo qof qaba baabuur). Mararka qaarkood, gaadiidka ugu fiican u socda ama fuushan baaskiil.
Haddii aad ku nooshahay magaalo weyn oo gaadiidka dadweynaha, aad u badan tahay in aadan u baahan tahay baabuur. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku nooshahay agagaarkeedii ama magaalo aan baska wanaagsan ama nidaamka metro, laga yaabaa in aad rabto in aad hesho baabuur. Lahaanshaha baabuur waa mid aad u sahlan. Ka hor inta aadan baabuur ka heli kartaa, waa in aad gudubto imtixaanka wadista. Waxa kale oo aad leedahay si ay u awoodaan inay bixiyaan gaariga iyo caymiska baabuurta. In USA, sharciga wuxuu leeyahay waa in aad leedahay caymis gaari. Waxaad u baahan doontaa macluumaad ku saabsan wadista ee USA. Waxaad u baahan doontaa in ay bartaan xeerarka wadista ah. Si arrintan loo sameeyo, Waad awoodaa buuga akhrisato darawalka Mareykanka ee ku qoran luqado badan.
Baaskiilka waa habka kharash yar-weyn oo si aad u hesho magaalada ku wareegsan. Baaskiilka waa gaar ahaan fiican haddii aad ku nooshahay magaalo oo yar yar. Magaalooyin badan ka weyn hadda leeyihiin jidadka baaskiilka iyo surimmada baaskiilka si ay u fududaato in baaskiil oo magaalada hareereeya.
Si kastaba ha ahaatee, baaskiilada waa u fududahay in ay xadaan oo laga rabey, si ay maal-qufulka wanaagsan oo hubi inaad had iyo jeer aamin jir oo dhan oo giraangirihiina in shay bir adag. Baro sida loo quful baaskiil. dugsiyada iyo goobaha shaqada intooda badan waxay leeyihiin meelo baabuurta la dhigto baaskiil.
taxi waa baabuur aad u kireeyo in aad qaadato mid ka mid meel kale. Tagaasida waa wax caadi ah in magaalooyinka waaweyn sida New York, iyo qaar ka mid ah dadka ganacsatada ah qaadan tagaasida maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, tagaasida yihiin kuwo aad u qaali ah, oo waxay uga istaagi karo gaadiidka, sida basaska.
Carpooling iyo kortaan-saamiyada
Mid ka mid ah jidka weyn si aad u hesho meelaha ay tahay in baabuur wata qof kale oo uu leeyahay baabuur ama in la isticmaalo a kortaan-wadaag. Taas macnaheedu waa koox dad ah oo wada kortaan ka mid ah baabuurta meesha la mid ah. Tusaale ahaan, aad baabuur wata oo laga yaabo in ay ka shaqeeyaan haddii aad ku nooshahay qof ka shaqeeya shaqo la mid ah sida aad u dhow. Ama waxaad laga yaabaa in caruurta uga qeyb qaataan wata u ah in ay hawlaha dugsiga tagaan. Haddii aad doonaysid inaad baabuur wata, waa in aad hubisaa in darawalkii gaariga uu leeyahay liisan darawalnimo oo ansax ah iyo kor-to-date caymiska dhigi.
Sidee in la wado ee USA
buugagan darawalka tarjumay ee loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga
Sidee si aad u hesho caawinaad turjumaad bilaash ah